मन्जिल बस्नेत र सारा श्रीपालीको उत्कृष्ट गित “तरकारी” सार्बजनिक (भिडियो हेर्नुहोस)
उल्सन श्रेष्ठ र सन्ध्या जोशीको स्वरमा “तरकारी” बोलको गित सार्वजनिक भएको छ । लय तथा संगीत उल्सन श्रेष्ठको रहेको छ । मन्जिल बस्नेत र सारा श्रीपालीको अभिनय रहेको यो गित एट के एभरेस्ट मोसन पिक्चर्सले बजारमा ल्याएको हो ।
निर्माण पक्षले म्युजिक भिडियो राम्रो बनेको बताएको छ तर आज मात्र सार्वजनिक भएको यस गितले दर्शकको मन कत्तिको जित्न सफल हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाकी नै छ ।
* हासो के हो ?
तपाई हाँस्नुहुन्छ, हामी हाँस्छौ । हाँस्दा के हुन्छ ? त्यो शब्दमा व्यक्त गर्ने कुरा होइन, अनुभूत गर्ने कुरा हो । मस्त हाँस्दा वा मुसुक्क मुस्कुराउँदा कस्तो महसुष हुन्छ ? हामीले अनुभव गरेकै छौं ।मुस्कुराउँदा वा हाँस्दा के हुन्छ ?मन प्रशन्न हुन्छ । मन प्रशन्न हुनु भनेको हृदयलाई स्वस्थ्य राख्नु हो ।
मस्त हाँस्दा शरीरका भित्री अंगहरुको व्यायाम हुन्छ । रक्तसंचार राम्ररी हुन पाउँछ । शरीरभित्र अक्सिजन पर्याप्त पुग्न पाउँछ । अनुहारको मांसपेशीको व्यायाम हुन्छ । आसपासको माहौल रमाइलो बन्छ । मनमा सकारात्मक भाव पैदा हुन्छ । पिर, चिन्ता, तनाव, कुण्ठा हराउँछ । भनिन्छ, शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता पनि बढ्छ ।
जसले हाँस्न जानेको छैनयोगी विकासानन्दले त्यसै भनेको होइनन्, ‘जसले हाँस्न जानेको छैन, उसले बाँच्न पनि जानेको छैन ।’ असली जीवनको स्वाद लिनका लागि मस्त हाँस्न पनि जान्नुपर्छ । हाँस्नु भनेको स्वस्थ्य जीवनशैलीकै मानक हो । अक्सर स्वस्थ्य, तन्दुरुस्त, प्रशन्न, सकारात्मक व्यक्तिहरु हाँसिरहेका हुन्छन् ।
मुस्कुराइरहेका हुन्छन् ।प्राकृतिक उपचारहाँस्नुलाई प्राकृतिक उपचार पनि मानिन्छ । धेरै हाँस्ने व्यक्तिहरु निरोगी हुने कतिपय अध्ययनले देखाएको छ । हाँस्नु हामीलाई कसैले सिकाएको होइन । यो प्रकृति प्रदत्त गुण हो, जो हामीले जन्मैदेखि लिएर आयौं । आमाको गर्भवाट बाहिर आएपछि हामी हाँस्यौं । हाम्रो उन्मुक्त हाँसोमा परिवारको खुसी मिसियो ।
तर, जति जति उमेर बढ्दै गयो, हाँसो हराउँदै गयो । हामी हाँस्न छाड्दै गयौं । करियर, परिवार, पैसा आदिको चक्करमा हामीले आफ्नो प्राकृतिक खुसी गुमाउँदै गयौ ।मुस्कुराउनु वा हाँस्नुको अनेक लाभ छ । जब हामी उन्मुक्त हाँस्छौं, मित्रवत र प्रेममय देखिन्छौ । हाम्रो अनुहार अधिक आकर्षक, प्रशन्न र तनावरहित देखिन्छ ।